Turkiga oo dhameystirey dhismaha cusub ee Isbitaalkii Digfeer iyo Madaxweyne Xasan oo booqday + Sawiro – idalenews.com
Turkiga oo dhameystirey dhismaha cusub ee Isbitaalkii Digfeer iyo Madaxweyne Xasan oo booqday + Sawiro
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta kormeeray Isbitaal cusub oo casri ah oo Dowladda Turkiga ay ka hirgelineyso Muqdisho.
Booqashada waxaa ku wehliyey Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Gaashaandhiga iyo Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada. Sidoo kale waxaa la socday Safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho.
Isbitaalkan cusub ayaa ah mid ay 200 sariir ah ay qaadeyso oo qalabka la keenayana ay yihiin kuwa ugu casrisan ee bariga Africa. Sidoo kale Isbitaalka waxaa laga garab dhisayaa Masaajid aad u weyn iyo Machadka kalkaaliyeyaasha. Sidoo kale Isbitaalka waxuu yeelanayaa qolalka gurmad-ka deg-degga ah oo leh 28 sariir.
Madaxweynaha ayaa yiri “shacabka waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ka wada shaqeeyaan si dalka aan uga hirgelino mashaariic casri ah oo shaqo u abuuri kara Soomaalida. Horumarka iyo nabaddu waa kuwa isku xiran. Markale waxaan u mahadcelinayaa wallaalaheen Turkiga oo hirgeliyey mashruuca isbitaalkan iyo machadka kal-kaaliyeesha caafimaadka.”
Daawo: Somali VOA oo bilowday Barnaamij Muuqaal ah oo la magac baxey Qubanaha VOA
Daawo: Magaalooyinka Qardho iyo Gaalkacyo ee Puntland oo lagu gubay sanaadiiqdii codbixinta doorashada golaha deegaanka…